स्वास्थ्य खबर – rastriyakhabar.com
काठमाडौँ। आज नेपालमा कोरोना भाइरसका ६ हजार ७ सय ३४ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसंगै कुल संक्रमितको संख्या ८ लाख ५९ हजार ४ सय ८५ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आज ५ सय ४७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म आठ लाख १६ हजार ९ सय ८५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयको..
डब्लुएचओले भन्यो, ‘ओमिक्रोनबाट सबै संक्रमित हुन्छन्, बुस्टर डोजले पनि रोक्न सक्दैन’
काठमाडौं । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट सबै जना संक्रमित हुने दाबी डब्लुएचओले गरेको छ साथै बुस्टर डोजले पनि यसलाई काम नगर्ने चेतावनी डब्लुएचओले दिएको छ । नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले विश्वका सबै देशलाई फेरी..
काठमडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लोपटक गरिएका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले दुई दिनअघि गरेका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । आज प्रधानमन्त्री देउवाले..
खोप नलगाएका नागरिकले माघ ३ देखि सार्वजनिक सेवा नपाउने
काठमाडौं । माघ ३ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दा कोरोना खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने भएको छ । कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका नागरिकलाई माघ ३ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो । आज बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले कोरोना खोप..
नेपालमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमित, थप ५४० जनामा संक्रमण, १ जनाको मृत्यु
शुक्रबार, पुस २३, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा बिहीबार ५ सय ४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको ७ हजार २ सय ९ पिसिआर परिक्षणका क्रममा ४ सय ७८ जना र ४ हजार ८ सय ९० एन्टीजेन परिक्षणका क्रममा ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मनत्रालयले जनाएको छ । यो संगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख २६ हजार ९..
बुधबार, पुस १४, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं। नियमित यौन सम्बन्धले महिलाहरुलाई मृगौलाको पत्थरीको समस्याबाट छुटकारा दिलाउन सक्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनमा नियमित यौन सम्बन्धले महिलाको मृगौलामा भएको पत्थरीको समस्या निको हुने खुलासा भएको हो । अध्ययनको नतिजामा भनिएको छ – तीन देखि ४ हप्तासम्म नियमित यौन सम्बन्धले महिलाको मृगौलामा भएको..
शुक्रबार, पुस ९, २०७८ मा प्रकाशित
दिनभर क्यालोरी बढाउने खानेकुराको सेवनले शरीरको तौल निकै तीव्र गतिमा बढ्ने गर्छ । धेरै क्यालोरीको सेवनले शरीरमा बोसो जम्मा हुन जान्छ । यस्तो समयमा तौल क मगर्न जुस वा तरल पदार्थ पिउन सकिन्छ । सागसब्जीका जुस वा तरल पदार्थ पिउँदा शरीरको तौल तीव्र रुपमा घट्दै जान्छ । यद्यपि, खराब जीवनशैली र खानपानका कारण..
निरन्तर रुघाखोकीले सतायो भने यस्ता उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ– सामान्यतया चिसो मौसममा रुघाखोकी बढी नै लाग्ने गर्छ । एकोहोरो खोकी लागिरहँदा दिक्क समेत लाग्छ । यस्ता उपाय अपनाउनुस् खोकी चट् मह र मरिचः कफलाई पातलो र नरम बनाउनको लागि मह एक प्रभावकारी घरेलु औषधी साबित हुन सक्छ । महले एन्टिइम्फ्लामेटरीको काम गर्छ । कफको पातलो झिल्ली गलामा अड्किएको हुँदा..
यस कारण बस्छ पाठेघर बाहिर बच्चा, देखिने गर्दछन् यस्ता लक्षण !
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै यस्तो हुँदैन। यौनसम्पर्क का बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब..
अप्रेसन गरेर ब’च्चा जन्माउने महिलाले ध्या’न दिनुप’र्ने यी ५ कुरा,नत्र पर्न सक्छ समस्या
ब’च्चा जन्माउँदा गरिने ‘सी’जरियन सेक्सन डे’लिभरी’ (अ’प्रेशन गरी बच्चा जन्माउने) लाई लिएर विभिन्न्न भ्रम सुन्न पाइन्छ । प्रसूती तथा स्त्रीरो’ग विशेषज्ञ डा शितल अग्रवालका अनुसार सीजरियन सेक्सनको भ्रम र वास्तविकता यस्ता छन्ः १‍) पहिलो बच्चा जन्माउँदा अ’प्रेशन गरिएको छ भने दोस्रो बच्चा जन्माउनका..
किड्नी ड्यामेज हुनुअघि शरीरले दिन्छ यस्तो ७ संकेत, यी लक्षणलाई नगर्नुहोस् इग्नोर
काठमाडौँ । किड्नी अर्थात मृगौला हाम्रो शरीरको निकै महत्वपूर्ण अंग हो। जसलाई स्वस्थ राख्न आवश्यक छ। यदी तपाईले मृगौलाई स्वस्थ राख्नु भएन भने पछि नराम्रोसँग पछुताउनु पर्छ। मृगौलाको स्वास्थ्यलाई धेरै मानिसले हल्का रुपमा लिने गर्छन्। तर पछि अचानक मृगौला ड्यामेज भयो भने निकै भारी पर्ने गर्छ। त्यसैले..
डा. धर्मेन्द्र कर्ण, छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ । जाडो याममा कतिपयको हातखुट्टा औँला सुन्निने, चिलाउने, पोल्ने तथा फुटेर घाउ नै हुने गर्छ । यस्तो खालको समस्यालाई मेडिकल भाषामा चिलब्लेन्स अथवा पर्नियोसिस भनिन्छ । यस्तो समस्या हुँदा चिसोले हातखुट्टाका औँला तथा नाकको टुप्पो, कानको लोती सुन्निने..
बुधबार, मंसिर २२, २०७८ मा प्रकाशित
जनकपुरधाम। नेपाल सरकारले अगामी पुससम्म ६६ प्रतिशत र चैत मसान्तसम्म नेपालमा कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेश-२ मा ३० प्रतिशतले मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन् । प्रदेश-२ स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार २० मंसिर सम्ममा ८ वटै जिल्लामा अहिलेसम्म ३० दशमलव ४३..
अत्यावश्यक नपरी विदेश भ्रमण नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह (विज्ञप्ति)
बिहिबार, मंसिर १६, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक नपरी विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको छ । अफ्रिकी मुलुकहरूमा हालै पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरियन्ट दक्षिण अफ्रिका र एसियाकै केही देशमा तिव्र बिस्तार भइरहेकोले सो संक्रमणलाई नेपाल प्रवेशबाट रोक्न मन्त्रालयले विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको हो..
म सँग यौन सम्बन्ध राख्दा क्यान्सर निको हुन्छ भन्ने डाक्टर बिरामीसहित समातिए
बुधबार, मंसिर १५, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अहिलेको दुनियाँमा क्यान्सरलाई निकै खतरनाक रोग मानिन्छ, यस रोगको उपचार पनि निकै महँगो मानिन्छ । क्यान्सर रोगलाई नेपाल जस्तो देशमा सबैभन्दा ठूलो रोग मानिन्छ । धेरैको मृत्यु यसै रोगका कारण हुने गरेको छ । यो बीचमा क्यान्सरसँग सम्बन्धित एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । बाहिर आएको खबर..